Ezona zikolo ziPhambili zi-15 zoNyango lweMassage kwiLizwe ngo-2021
I-2021 yaMazwe ngaMazwe kunye neNgingqi yeScholarships | Funda kwelinye ilizwe Amathuba | Izibonelelo zezeMfundo kunye neNgxowa-mali |
Agasti 25, 2021 Eze uThadayo
Ezona zikolo ziPhambili zi-15 zoNyango lweZonyango kwihlabathi
Unomdla wokuba yi-massage therapist? Faka isicelo sesona sikolo sonyango silungileyo esidwelisiweyo kwaye sicacisiwe kweli nqaku. Ezi zikolo zonyango ze-massage zivunyiwe kwaye ziyilelwe ukukuxhobisa ngezakhono ezizizo kunye nolwazi lokuba yingcali yokuthambisa.
Unyango lwe-Massage kukunyanzeliswa kwesayensi kwezicubu zomzimba ezithambileyo, ezibandakanya iindlela zobugcisa (izandla-on) ezinje ngokubonelela ngoxinzelelo olusisigxina okanye olushukumayo, ukubamba, kunye nokuphatha izihlunu kunye nezicubu zomzimba. Umntu owaziyo ezi ndlela kwaye azisebenzise emzimbeni womntu waziwa njengesixhobo sokuthambisa kunye nokuziqhelanisa nale ndawo, kuyakufuneka uye kwisikolo sonyango esamkelweyo, ufumane ulwazi, izakhono kunye nobuchule, kwaye ufumane ziqinisekisiwe.
Ukuphulula kunokubanceda abantu abanezifo ezinganyangekiyo njengomhlaza, ukulawula iintlungu kunye noxinzelelo ngelixa kunciphisa iziphumo zomzimba zoxinzelelo. Uxinzelelo olunxulumene noxinzelelo, ukudinwa okunxulumene nomhlaza, ubunzima bokulala, uxinzelelo lwegazi oluphezulu, isifo seswekile, iintlungu ezisezantsi, kunye noxinzelelo zizimeko ezimbalwa ezinokukunceda.
Njengonyango oluqinisekisiweyo lokuthambisa, ungasebenza kwicandelo lokhathalelo lwempilo kwaye uncede abaguli abafuna imithambo yonyango ukuze babe ngcono. Ngephepha-mvume lakho, ungaqala ishishini lakho, uvule i-spa kunye neziko lokuthambisa kwaye ubize ithokheni yeenkonzo ozinikezelayo. Ngomgangatho owandileyo woxinzelelo kunye nemicimbi enxulumene nomhlaza, imfuno yokunyanga i-massage Therapists iphezulu kunangaphambili.
Kweli nqaku, andikhange ndixoxe nje ngezona zikolo zibalaseleyo zokunyanga emhlabeni kodwa ndiza kube ndingena kwezinye izihloko ezinje ngezona zikolo zibalaseleyo zokunyanga eOntario, ezona zikolo zibalaseleyo zokuthambisa eFlorida, indlela yokufumana ezona zikolo zibalaseleyo kufutshane nam, ezona zikolo zibalaseleyo zokuthambisa, kunye nemibuzo ebuzwa rhoqo enxulumene nezona zikolo zibalaseleyo zokunyanga.
Ezona zikolo zibalaseleyo zokuthambisa ekuxoxwe ngazo apha zizikolo ezivunyiweyo kwaye kufuneka uye kwisikolo sonyango esamkelweyo ngaphandle kokufumana ilayisensi okanye nokuba uyayenza, iya kuba yinkohliso enokukufaka kwingxaki yezomthetho nabasemagunyeni imeko.
Ngaphandle kokuqhubeka, makhe singene kumxholo ophambili ukuqala kuqala nge-FAQs.
1 Ii-FAQ kwezona Zikolo ziLungileyo zoNyango
1.1 Kuthatha ixesha elingakanani ukuze ube ngugqirha wokuthanjiswa okuqinisekisiweyo?
1.2 Ngaba benza malini abanyangi?
2 Ezona zikolo ziLungileyo zoNyango eMhlabeni
2.1 # 1 iZiko leLizwe leHolistic Institute (NHI)
2.1.1 Website esemthethweni
2.2 # 2 Miami Dade College
2.2.1 Website esemthethweni
2.3 # 3 IZiko lase Mzantsi-ntshona lobuGcisa boNyango
2.3.1 Website esemthethweni
2.4 # 4 iYunivesithi yeSizwe yezeNzululwazi zezeMpilo
2.4.1 Website esemthethweni
2.5 # 5 Ikholeji yaseCanada yokuMasaja kunye neHydrotherapy
2.5.1 Website esemthethweni
2.6 # 6 Isikolo saseColorado soBugcisa boNyango
2.6.1 Website esemthethweni
2.7 # 7 Okanagan Valley College of Massage Therapy
2.7.1 Website esemthethweni
2.8 # 8 Ikholeji yaseNew York yezeMpilo
2.8.1 Website esemthethweni
2.9 # 9 Iziko leSikolo seMpilo yeNdalo yoNyango lokuPhulula
2.9.1 Website esemthethweni
2.10 # 10 iYunivesithi yaseMotherapy yeUtah
3 Ezona zikolo ziBalaseleyo zoNyango lwe-Ontario
3.1 1. I-ICT Kikkawa College
3.1.1 Website esemthethweni
3.2 2. Ikholeji yaseBryan
3.2.1 Website esemthethweni
3.3 3. Kwikholeji yaseHumber
3.3.1 Website esemthethweni
3.4 4. Ikholeji yaseFanshawe
3.4.1 Website esemthethweni
3.5 5. Ikholeji yaseMedix
3.5.1 Website esemthethweni
4 Ezona zikolo ziLungileyo zoNyango eFlorida
4.1 1. Iziko laseHollywood leMisebenzi yoBuhle
4.1.1 Website esemthethweni
4.2 2. KwiKholeji yaseBroward
4.2.1 Website esemthethweni
4.3 3. IYunivesithi yaseDailytona State
4.3.1 Website esemthethweni
4.4 4. IPensacola State College
4.4.1 Website esemthethweni
4.5 5. ILa Belle Beauty Academy
4.5.1 Website esemthethweni
5 Ungalufumana njani iZikolo zoNyango lweMasaji eziPhambili kufutshane nam
6 Ezona zikolo ziLungileyo zeZikolo zoNyango
6.1 Ngubani iNgcali yokuPhulula iEquine?
6.2 Ufuna iqondo elingakanani ukuze ube yingcali yokuthanjiswa okulinganayo?
6.3 Kuthatha ixesha elingakanani ukuba yi-equine massage therapist?
6.4 Ngaba unyango lwe-equine massage yinkqubo elungileyo?
6.5 I ngcebiso
Ii-FAQ kwezona Zikolo ziLungileyo zoNyango
Oku kulandelayo yimibuzo ebuzwa rhoqo kwezona zikolo zibalaseleyo zokunyanga kwihlabathi:
Kuthatha ixesha elingakanani ukuze ube ngugqirha wokuthanjiswa okuqinisekisiweyo?
Ixesha elithathwayo ukuze ube yipilisi yokuthambisa eqinisekisiweyo ixhomekeke kubume benkqubo obhalise kuyo. Ukuba ubhalisa kwidiploma okanye kwinkqubo yesatifikethi ukuze ube yipilisi yokuthambisa, kuya kuthatha phakathi kweeveki ezimbalwa ukuya kwiinyanga ezi-6 ukugqibezela inkqubo . Ngokwesiqhelo, idiploma okanye inkqubo yesatifikethi ayithathi xesha kwaye ikunika izakhono ezikhawulezayo ukuze ube yipilisi yokuthambisa.
Ukuba ufuna ukwandisa ulwazi lwakho ebaleni, ungaya kwinkqubo yedigri enxulumene nayo ethatha iminyaka emi-2 ukuyigqiba. Ukuthatha eli nqanaba kuya kukunika ulwazi olunzulu lokuba yipilisi yokuthambisa kunye nabasebenzi ngokuqinisekileyo baya kukhetha.
Ngaba benza malini abanyangi?
Ngokuka-Forbes, i-avareji yomvuzo welizwe wonyango lwe-massage yi-47,180 yeedola.
Ezona zikolo ziLungileyo zoNyango eMhlabeni
Izikolo eziphambili kwihlabathi ezibonelela ngeenkqubo zonyango lokuthambisa zezi:
IZiko leLizwe lamaHhala
Amaziko akumazantsi mpuma oBugcisa boPhiliso
INyuvesi yeSizwe yezeMpilo
Ikholeji yaseCanada yokuMasaja kunye neHydrotherapy
Isikolo saseColorado soBugcisa boPhiliso
I-Okanagan Valley College of Massage Therapy
Ikholeji yaseNew York yoBuchule beMpilo
Iziko leSikolo seMpilo yeNdalo yoNyango lokuPhulula
I-Myotherapy College yase-Utah
# 1 iZiko leLizwe leHolistic Institute (NHI)
IZiko leLizwe leHolistic sesinye sezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango emhlabeni, yasekwa kwi1979 njengekholeji yabucala, enenzuzo yonyango lokuthambisa e-Emeryville, California. Esi sikolo sinezinye iikhampasi eLos Angeles, ePetaluma, eSacramento, eSan Jose, eSan Francisco nase-Orange County. Ke, ukuba ukuyo nayiphi na kwezi ndawo kwaye ufuna ukuba yingcali yokuthanjiswa, unokufuna ukubhalisa nakwezinye iikhampasi.
I-NHI ivunyiwe liBhunga eliQinisekisa iMfundo ngoQeqesho lweMfundo noQeqesho (i-ACCET) elamkelwa liSebe leMfundo laseMelika. Inkqubo yokuthanjiswa kwe-NHI yenzelwe ukukuqeqesha ukuba ube nobuchule kwiindlela ezahlukeneyo zokuthambisa, ezinje ngeSweden, iShiatsu, iTissue enzulu, kunye nonyango lweMyofascial. Kukwakho neNkqubo yokuNyanga yeNyuromuscular Advanced eyinkqubo yonyango yokuthanjiswa, abafundi bamanye amazwe bamkelwe kwiinkqubo ezahlukeneyo.
Imali yokufunda $ 15,588
# 2 Miami Dade College
Ikholeji yaseMiami Dade sesinye sezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango emhlabeni, eMiami, eFlorida, eUnited States. Yayisungulwa kwi-1959 kwaye ineekhampasi ze-8 zizonke kunye namaziko okufikelela angama-21 kulo lonke elaseMiami-Dade County. Ikholeji ibonelela ngeenkqubo zonyango ze-3 ezi:
Unyango lweMassage-Ukhetho olukhawulezileyo
Unyango lweMassage-Ukhetho oluqhelekileyo
Unyango lwe-Massage-Ukhetho lwenguqu
Ezi nkqubo zintathu zifuna iikhredithi ezingama-3 kunye nonyaka omnye wokuzigqiba kwaye ufumane isatifikethi sobuchwephesha kumakhondo. Ukugqitywa kwale nkqubo ngempumelelo, isidanga kufanelekile ukuba sihlalele uviwo lweLizwe laseFlorida Massage Therapy.
Ikholeji yaseMiami Dade yamkelwe yiBhodi yeFlorida yoNyango lweMassage kunye noMbutho waseZantsi weeKholeji kunye neKhomishini yeZikolo kwiikholeji. Abafundi bamanye amazwe bayamkelwa kule nkqubo. Imali yokufunda yi- $ 82.78 ngeyure kubahlali kunye ne- $ 331.11 ngeyure yabafundi abangaphandle korhulumente.
# 3 IZiko lase Mzantsi-ntshona lobuGcisa boNyango
UMzantsi-ntshona weZiko loBugcisa lokuPhulukisa sesinye sezona zikolo zibalaseleyo zonyango e-Tempe, eArizona. Ivunyiwe liBhunga eliQinisayo leMfundo eQhubekayo noQeqesho (i-ACCET) kwaye yamkelwe liSebe leMfundo laseMelika (i-USDE). Iinkqubo ezibonelelwa sisikolo zezi:
Impilo yeQela kunye noMqeqeshi weMpilo
Umdibanisi wezoBugcisa boNyango
Iinkqubo zoQeqesho loMzimba
INkqubo ye-Herbalism yaseNtshona kunye
Amakhulu eMfundo eQhubekayo eQhubekayo (i-CEUs)
Iinkqubo zoqeqesho lokuthanjiswa ziyilelwe ukukulungiselela ukuba usebenze kuseto olufana neeofisi zabucala, iiaspa, izibhedlele, iiklinikhi ezikhethekileyo zokuthambisa, kunye namaziko okomelela. Uya kuxhotyiswa ngokwaneleyo ukwenza ubuchule bakho bobuchule, okanye uqeshise kwaye wenze indawo kwi-spa yokusetyenziswa okuninzi okanye umboneleli wezempilo kunye nokuba sempilweni. Iikhosi zinikezelwa kwi-campus okanye kwi-intanethi kwaye ungabhalisa kuyo nayiphi na indlela yokufunda efanelekileyo kuwe.
Imirhumo yokufunda isusela kwi- $ 36.25 ukuya kwi- $ 75 ngeyure.
# 4 iYunivesithi yeSizwe yezeNzululwazi zezeMpilo
IYunivesithi yeSizwe yezeNzululwazi yezeMpilo yasekwa e1906 njengeyunivesithi yabucala eLombard, eIllinois, kwaye yamkelwa njengesinye sezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango. Iyunivesithi igxile kwisayensi yezempilo kwaye ibonelela ngesatifikethi okanye isidanga sokudibanisa kunyango lokuthambisa olulungiselelwe ukubonelela abafundi ngemiyalelo ebanzi yezandla ukuze bakwazi ukubonelela ngononophelo oluphezulu kubathengi babo.
Abafundi bafunda iindlela ezahlukeneyo zokuthambisa kubandakanya ezemidlalo, umthambo onzulu, ukuthambisa kweSweden, kunye nonyango lwenqaku. Imali yokufunda apha yi- $ 20.97 ngeyure.
# 5 Ikholeji yaseCanada yokuMasaja kunye neHydrotherapy
Yasekwa ngonyaka we-1946 kwaye ikumbindi wedolophu iToronto, Canada, iKholeji yaseKhanada yokuMasa kunye neHydrotherapy sesinye sezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango emhlabeni. Likhaya labafundi abangama-120 nangaphezulu kwamacandelo e-30. Inkqubo yonyango yokuthanjiswa apha ithatha iinyanga ezingama-20 okanye malunga neminyaka emi-2 ukugqiba inkqubo yeDiploma yonyango.
Eliziko livunyiwe liBhunga laseCanada loNyango loNyango lokuVunywa kunye neKholeji yeeTherapy ze-Massage ze-Ontario (CMTO). Ikholeji yamkela abafundi bamanye amazwe, kwaye imali yokufunda kwabafundi basekhaya yi- $ 10,294 kunyaka wokuqala, $ 10,301 kunyaka wesibini. Imali yokufunda yamanye amazwe $ 12,480 kunyaka wokuqala kunye $ 12,020 kunyaka wesibini.
# 6 Isikolo saseColorado soBugcisa boNyango
Isebenza kangangeminyaka engama-35 ngoku kwaye ibonelela ngoqeqesho olukhethekileyo lokuthanjiswa komzimba, iSikolo seColorado soBugcisa bokuPhulukisa siza nezi zibonelelo zilandelayo:
Gqibezela imfundo yakho yokuthambisa kwiinyanga nje ezili-9 okanye ezili-12
Sebenza ebaleni olithandayo kwaye likunike ishedyuli eguqukayo
Fumana umsebenzi ogqibeleleyo ngoncedo oluvela kwisebe leenkonzo zesikolo
Inkqubo yonyango yokuthanjiswa apha igqityiwe ngeeyure ezingama-720 ngeyona njongo iphambili yokubonelela ngobuchule obuphambili obuyimfuneko kwimpilo yokuthambisa. Ezi zifundo zenzelwe ukubonelela abafundi ngolwazi lwangaphakathi, ukuqonda, kunye nokusetyenziswa kweendlela zokwenza umthambo. Imali yokufunda $ 12,974.72
# 7 Okanagan Valley College of Massage Therapy
Eyasungulwa kwi-1994 kwaye yamkelwa phakathi kwezona zikolo zibalaseleyo zonyango eCanada, iOkanagan Valley College yoNyango lweMassage yinkqubo yokuqala yoNyango oluBhalisiweyo lokuBulala eCanada. Inkqubo yokuthanjiswa ibonelelwa ngeendlela ezimbini: ezisebenzayo okanye "izandla zakho" kunye nezifundiswa okanye uqeqesho "lwengqondo yakho".
Inkqubo yoqeqesho lokunyanga igqityiwe kwiminyaka emi-2 kwaye abafundi bamanye amazwe bayamkelwa kule nkqubo. Imali yokufunda $ 30,365
# 8 Ikholeji yaseNew York yezeMpilo
Ikholeji yaseNew York yeKholeji yezeMpilo yenye yezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango e-United States nakwihlabathi. Eliziko libonelela ngokudibeneyo kwetyala elinama-72 kwiNkqubo yeMfundo yezeMfundo (AOS). Ukugqitywa kwale nkqubo, uvumelekile ukuba uhlale kuvavanyo lwelayisensi lwaseNew York State, kwaye uhlale kuvavanyo lweBhodi yokuLayisenisa.
Inkqubo inokugqitywa phakathi kweenyanga ezingama-20 ukuya kwezingama-24 kunye nexesha lesingxungxo, kunye nexesha elipheleleyo, ukhetho lokufunda luyafumaneka kubafundi abasebenzayo okanye abanoxanduva ngaphandle kwesikolo. Ifumana ukuvunywa kwiSebe lezeMfundo laseNew York, iBhodi yesiQinisekiso seLizwe yeMassage yoNyango, kunye neRegents yeBhodi yeLizwe yaseNew York kunye noMkomishinala wezeMfundo.
Imali yokufunda yi- $ 390 ngekhredithi.
# 9 Iziko leSikolo seMpilo yeNdalo yoNyango lokuPhulula
Iziko leSikolo seMpilo yeNdalo yoNyango lweMassage sesinye sezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango emhlabeni kwaye libonelela ngenkqubo yoqeqesho yokuvunywa yokuthanjiswa ngeendlela ezintathu: inkqubo yosuku lonke, inkqubo yentsasa yexeshana, kunye nenxalenye- Inkqubo yangokuhlwa.
Inkqubo yexesha elizeleyo ithatha iinyanga ezili-9 ukuya kwezi-12 ukuyigqiba ngelixa inkqubo yexeshana yakusasa ithatha iinyanga ezili-14 ukuyigqiba kwaye inkqubo yexeshana yangokuhlwa ithatha iinyanga ezingama-22 ukuyigqiba kwaye ufumane isatifikethi ukugqitywa kwenkqubo oyithandayo. Imali yokufunda $ 17,500
# 10 iYunivesithi yaseMotherapy yeUtah
Ikholeji yaseMyotherapy yase-Utah esekwe kwi-1987 ukusukela ngoku ibonelela ngeemfundiso kwindlela ebanzi yeklinikhi yokuthambisa unyango, uqeqesho ngaphezulu kwezitayile ezingama-20 kunye neendlela zokuziphatha. Iziko lamkelwe phakathi kwezona zikolo zibalaseleyo zokunyanga emhlabeni kwaye likuxhobisa ngomxube weendlela zangoku zokunyanga ukuze uphumelele ebaleni.
Abaphumelele kwinkqubo yonyango yokuthanjiswa baya kulungela ukuhlala kuvavanyo lweMassage kunye neLayisensi yoMzimba, ebonelelwa yi-Federation of State Massage Therapy Boards, ukufumana ilayisensi yabo. Kuthatha malunga neenyanga ezisixhenxe nesiqingatha ukugqiba inkqubo, kwaye iindlela zokufunda eziguqukayo zibonelelwa. Ungabhalisela usuku okanye iiklasi zangokuhlwa, nokuba yeyiphi na ekufaneleyo. Imali yokufunda $ 7
Ezi zezona zikolo zi-10 zibalaseleyo kwezonyango emhlabeni, zonke zivunyiwe yimibutho efanelekileyo yezemfundo, kwaye zamkela abafundi bamanye amazwe.
Ezona zikolo ziBalaseleyo zoNyango lwe-Ontario
I-Ontario sisixeko eCanada kwaye iyindawo yemfundo eyaziwayo yabafundi, apha, siza kuvavanya ezona zikolo zibalaseleyo zokunyanga e-Ontario.
Ikholeji yase-ICT Kikkawa
1. I-ICT Kikkawa College
Esi sesinye sezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango eToronto, eOntario, Canada, kwaye ikhethekileyo kwimfundo yokuthanjiswa kwemithambo kangangeminyaka engama-35 kwaye izinikele ekuphumeleleni iingcali zonyango kunye neengcali. Isicelo senkqubo yonyango yokuthanjiswa kwikholeji ye-ICT Kikkawa samkelwe unyaka wonke.
Unokufaka isicelo senkqubo yesiqhelo ethatha iiveki ezingama-82 ukuyigqiba, indlela ekhawulezayo efuna iiveki ezingama-73 ukuyigqiba, okanye okwethutyana. Ukufaka isicelo, kuya kufuneka ungenise ikopi esemthethweni yokubhalwa kwesikolo esiphakamileyo esidluliselwe ngqo kwiziko okanye ikopi enye esemthethweni yayo nayiphi na ingxelo ebhalwe emva kwesekondari ethunyelwe ngqo kwiziko ekuyiwe kulo.
2. Ikholeji yaseBryan
Ikholeji yaseBryan ibonelela ngeenkqubo zokuthambisa iinkqubo ezikwi-Intanethi nakwi-campus ukusukela ngo-1940 kwaye sesinye sezona zikolo zibalaseleyo zonyango e-Ontario. Ikharityhulam yonyango yokuthanjiswa kwiKholeji yaseBryan yenzelwe iingcali ukuba zitshatise iimfuno zokutshintsha kwemakethi kwaye zikunike uqeqesho kunye nenkxaso yokuqinisekisa ukugqitywa kwakho ngempumelelo.
Ikharityhulamu iphononongwa rhoqo ngonyaka kwaye iya kukuxhobisa ngeendlela ezahlukeneyo zokuthambisa ezibandakanya ukusetwa kweSweden, ukuthambeka kwezemidlalo, i-hydrotherapy, unyango lweklinikhi, unyango lwenqaku, kunye nezinye.
3. Ikholeji yaseHumber
I-Faculty yeSayensi yezeMpilo kunye nokuPhila kwiKholeji yaseHumber ibonelela ngeDiploma ePhambili kuNyango lweMassage oluthatha iisemester ezi-6 ukuyigqiba. Indlela yokuhanjiswa ikwi-Intanethi nakwi-campus yabafundi ukuba bakhethe indlela yokufunda abayithandayo.
Inkqubo yokuHamba yokuHamba kaHumber yokuqhubela phambili idiploma ikunika ulungiselelo olunzulu lwezifundo kunye namava asebenzisekayo afunekayo ukuze ube lilungu elifanelekileyo leqela lezempilo. Abafundi bamanye amazwe bayamkelwa kule nkqubo.
Ikholeji iFanshawe yenye yezona zikolo zibalaseleyo zonyango eOntario, Canada. Isikolo sibonelela ngokugxila kakhulu kulwazi lwezonyango, ukukuxhobisa ngezakhono zokuthambisa kwiklinikhi eqhuba abafundi, apho uya kuvavanya iindlela ezininzi zobugcisa. Uya kufunda kwakhona, ngesandla sokuqala, indlela yokuvavanya abathengi bakho kunye neemfuno zabo, kunye nendlela yokugcina, ukubuyisela kwimeko yesiqhelo, kunye nokwandisa ukusebenza komzimba ukukhupha iintlungu.
5. Ikholeji yaseMedix
Ikholeji yaseMedix ibonelela ngeNkqubo yeDiploma yoNyango lweMassage kwikhampasi yayo yaseToronto, isebenzisa ithiyori kunye nendlela yokwenza ngezandla yokuxhobisa abafundi ngezakhono zonyango zokuthambisa. Abafundi baya kufunda ngezifundo ezahlukeneyo ezisekwe kwithiyori enxulumene nomzimba womntu, i-physiology kunye ne-pathology.
Kwaye ikhosi esekwe ngokusebenzayo iya kugxila kuvavanyo kunye neenkqubo zonyango lweendlela ezahlukeneyo zomzimba womntu kwaye njengoko kuchaziwe ngumsebenzi wonyango lokuthambisa.
Ezi zezona zikolo zi-5 zibalaseleyo kwezonyango e-Ontario kwaye ukuba uhlala ufuna ukuba yipilisi yokubhalisa ebhalisiweyo evela kwiziko laseCanada, nali ithuba lakho.
Ezona zikolo ziLungileyo zoNyango eFlorida
Kweli candelo, ezona zikolo zibalaseleyo zokunyanga eFlorida kuxoxiwe ngazo kwaye amakhonkco kwiwebhusayithi abonelelwe ukuba ufumane ulwazi ngakumbi kwaye usebenzise. Ukwamkelwa, izikolo zifuna idiploma yamabanga aphakamileyo okanye iGED. Ukuthatha iiklasi ezininzi zezibalo kunye nesayensi kwisikolo esiphakamileyo kunokunceda umfundi ukuba aphumelele ukungena.
IZiko laseHollywood leMisebenzi yoBuhle
College of Daytona
IPensacola State College
Isikolo sobuhle saseLa Belle
1. Iziko laseHollywood leMisebenzi yoBuhle
Esi sesinye sezona zikolo zibalaseleyo zonyango eFlorida, iziko lineekhampasi eHollywood, West Palm Beach, naseOrlando ezibonelela ngeenkqubo zonyango lokuthambisa. Kuthatha iiveki ezingama-26 zeeseshoni zosuku okanye iiveki ezingama-33 zeeklasi zangokuhlwa ukugqibezela iiyure ezingama-720 zokufunda kunye namava ezonyango afunekayo kwikharityhulamu.
I-Anatomy kunye nePhysics, i-Musculoskeletal Anatomy, i-Medical and Massage Massage ne-Hydrotherapy, kunye neZenzo zoShishino lobuGcisa zezinye zeekhosi ezifunekayo (nge-internship). Iindlela zaseMpuma, umzimba waseAsia, unyango lwe-craniosacral, iindlela zamandla, i-geriatric massage, ubuchule be-spa, ukuthambiswa kokubeleka kunye nosana, i-reflexology, kunye ne-Thai massage zezinye zeendlela ezifundiswe abafundi.
2. KwiKholeji yaseBroward
Iiklasi zasemini nezangokuhlwa ziyafumaneka kwinkqubo yonyango yokuthambisa yeeyure ezingama-750 kwiKhampasi eseMantla. Izifundo, iintetho, ukubonisa izandla, ukusebenzisana, iifilimu, abahlohli beendwendwe, uhambo lwasebaleni, kunye nokuziqhelanisa nokubekwa kweliso kwi-campus nakwi-campus zonke ziyinxalenye yekharityhulam.
Inkxaso yobomi esisiseko (i-CPR), imigaqo yokuziphatha kunye nemigangatho, i-anatomy kunye ne-physiology, unyango lwe-massage, iindlela ezihambelanayo, iindlela ze-hydrotherapy, kunye neendlela zokuziphatha kunye nemigangatho yazo zonke ezi zifundo ziyimfuneko. Uqeqesho lweklinikhi luyafuneka kuye wonke umfundi.
Ikholeji yaseBroward ibonelela ngeyona nkqubo yokunyanga iFlorida.
3. I-Daytona State College
Ikholeji yase-Daytona State ibonelela nge-2-semester, inkqubo yokunyanga ngetyala engama-25 ebandakanya imiyalelo kunye noqeqesho oluziiyure ezingama-750. Eli ziko sesinye sezona zikolo zibalaseleyo zonyango eFlorida kunye nekharityhulamu yayo edibanisa iindlela zokuthambisa zaseMpuma naseNtshona.
Abafundi bafumana ilizwe lokwenyani, amava ezandla kunye nabathengi bakarhulumente ngexesha lokufunda kunye nakwikliniki yabafundi ekhampasini.
4. IPensacola State College
Eli liziko elidala lasemva kwesekondari eFlorida kwaye libonelela ngenkqubo yokufumana umyalezo wokuthambisa iiyure ezingama-750. Ikharityhulamu yenkqubo igubungela ithiyori kunye nezandla zokuziqhelanisa nokuthanjiswa, i-hydrotherapy, ucoceko, ukubonisa ukuziqhelanisa, i-anatomy yabantu kunye nezakhono zokuqesheka.
5. ILa Belle Beauty Academy
ILa Belle Beauty Academy sesinye sezona zikolo zibalaseleyo zonyango eFlorida, inkqubo yonyango yokuthanjiswa apha ineeyure ezingama-600, ezili-150 zazo zibandakanya iinkqubo zonyango. Inkqubo yenzelwe ukuxhobisa abafundi ngeendlela ezahlukeneyo kubandakanya iintshukumo zokwenza umthambo, iShiatsu, unyango lwe-somatic, i-acupressure, izicubu ezinzulu, i-hydrotherapy, inkqubo yomzimba epheleleyo, nokunye okuninzi.
Ungalufumana njani iZikolo zoNyango lweMasaji eziPhambili kufutshane nam
Ukufumana isikolo sonyango lokuthambisa kufutshane nawe kulula nje ngokuba usifundile, kufuneka ukhangele nje umxholo ongezantsi usebenzisa ukukhangela kuGoogle. Iziphumo kufuneka zikunike uluhlu lwazo zonke izikolo zonyango lokuthambisa ezikufutshane nawe.
Funda uphononongo lwaso nasiphi na isikolo esinomdla wokwazi ukuba ngaba sesinye sezona zibalaseleyo ezikungqongileyo. Nje ukuba ubone eyona ilungileyo, inyathelo elilandelayo kufuneka undwendwele iwebhusayithi yesikolo ukuze ufunde okungakumbi ngeendlela zabo zokufundisa kunye nokuba ungabhalisa njani kule nkqubo.
Ezona zikolo ziLungileyo zeZikolo zoNyango
Ngaphambi kokuntywila kumxholo ophambili, jonga ngokukhawuleza ii-FAQ ezingezantsi ngokubhekisele kwezona zikolo zibalaseleyo zokunyanga.
Ngubani iNgcali yokuPhulula iEquine?
Ukuthanjiswa ngokulinganayo yinto yokuthanjiswa kwamahashe aqale kwii-90s zokuqala, ibe yindawo ekhulayo yonyango lwe-equine, esetyenziselwa ukukhwela imihla ngemihla kunye nokuvuselelwa kwasemva koxinzelelo. I-equine massage therapist yinto nje yokunyanga ihashe, exhotyiswe ngezakhono, ulwazi, kunye nobuchule bokuziqhelanisa nezi zinto.
Ufuna iqondo elingakanani ukuze ube yingcali yokuthanjiswa okulinganayo?
Imfuno yesidanga sokuba yi-equine massage therapist iyahluka ngurhulumente. Amanye amazwe awanazo iimfuno zokufunda ngelixa abanye befuna ugqirha woNyango lweZilwanyana.
Kuthatha ixesha elingakanani ukuba yi-equine massage therapist?
Uqeqesho olufunekayo ukuze ube yi-equine massage therapist luthatha nje iintsuku ezintathu okanye kangangeeveki ezili-12.
Ngaba unyango lwe-equine massage yinkqubo elungileyo?
Ewe ngumsebenzi olungileyo. Uba phakathi kwamahashe kwaye ubonelele iimfuno zabo.
Ezona zikolo zonyango zibalaseleyo ze-equine zezi:
Isikolo se-D'Arcy Lane se-Equine Massage
I-Equissage-Isikolo se-Equine Massage
Ukuthanjiswa kweMidlalo yeZilwanyana eziDyiniyo
Isikolo esiseMantla ntshona soPhuculo lwezilwanyana
Ikholeji yonyango lwePrairie Winds Equine Massage Therapy
Unyango lwezeMidlalo lukaWilson Meagher
Zithini iindidi ezahlukeneyo zengqondo kunye nendima yabo
Izifundo zasimahla ze-10 zeSayensi yaBafundi abaQalayo
I-13 iiyunivesithi zaseCanada ezinamaxabiso aphezulu okwamkelwa
Iiklasi ezingama-25 eziPhezulu zokuLawula umsindo
Blog Post Funda iSakhono kwi-Intanethi izifundo zekhompyutha Isifundo kwamanye amazwe Isikhokelo Isifundo eCanada | Ukwamkelwa | Ulwabiwo-mali | Imirhumo | Izibonelelo neMali mboleko funda kwi-intanethi
Ezona zikolo zonyango zilungileyo ze-equineezona zikolo zibalaseleyo zonyangoezona zikolo zibalaseleyo zonyango eCanadaIzikolo zonyango olulungileyo zeFloridaezona zikolo zibalaseleyo zonyango kunyangoezona zikolo zibalaseleyo zonyango kwihlabathiindlela yokufumana ezona zikolo zibalaseleyo zokunyanga kufutshane nam
Post Previous:IYunivesithi yaseToronto eQhubeka neMfundo | Iinkcukacha ezigcweleyo kunye nokuSebenza
Okulandelayo Post:Amanyathelo ama-5 okufumana isiDanga seMasters ngaphandle kweeBachelors